Sida loo sameeyo jukebox-ka guryaha lagu sameeyo iyo shaqsiyeynta | Qalabka bilaashka ah
Muusigga asalka ahi waa wax aan dhiman, in kasta oo uu caan ka ahaa sannadihii 70-maadkii ilaa 80-meeyadii. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan sannadahaas waa jukebox ama jukebox caan ah oo meel ama baarar ku dhigay qiimo yar. Dib-u-noqoshada dib-u-celinta ayaa ka dhigtay jukeboxes-ka mar labaad caan ah oo xitaa la tartamaya adeegyada muusikada casriga ah sida Spotify ama Deezer.
Marka xigta waxaan faahfaahin doonnaa sida loo dhiso jukebox-ka guryaha lagu sameeyo iyada oo aan la iibsan ama aan la adeegsan aalado hore iyo taariikh duug ah oo laga yaabo inay u shaqeeyaan si sax ah ama sidii la rabay. Laakiin kahor Waa maxay dhab ahaan jukebox?
1 Waa maxay jukebox?
2 Qalab noocee ah ayaan ubaahanahay?
3 Isugeynta Jukebox
4 Sidee loo isticmaalaa Jukebox-kan?
5 Jukeboxyada ma yihiin kuwa waqtigoodu dhammaaday?
Waa maxay jukebox?
Qaar badan magaca Jukebox wuxuu u egyahay tikniyoolajiyad cusub oo qaali ah, kuwa kale waxay u egyihiin qosol, laakiin dhab ahaan, jukebox aad ayuu uga duwan yahay fikradahan ama muujintaas.
Jukebox waa erayga Ingiriisiga oo loola jeedo jukebox, jukebox ama rikoor dhaqameed dhaqameed taas oo ku jirtay baararka iyo xarumaha firaaqada, iyada oo ah cunsur weyn oo qurxinaysa qol ama qol kasta. Fashion for retro waxay ka dhigtay dad aad iyo aad u tiro badan inay raadiyaan oo ay ku raaxaystaan ​​qalabkan inkastoo xaqiiqda ah in markii ay dhasheen aysan sii ahaan jirin kuwo moodada ama aan lagu soo saarin warshado, inkasta oo ay ugu wacan tahay teknoolojiyada bilaashka ah, jiritaanka Jukebox “cusbooneysiiyay” waxay leeyihiin waxyaabo cusub sida kuhadlayaasha caqliga badan, shaashadaha taabashada ama dakhliga soo gala barnaamijyada lacagta lagu bixiyo halkii qadaadiic lacagta.
Waxyaabaha lagu garto jukebox-ka ayaa ah liis muusiko ah oo dijitaal ahaan ama muuqaal ahaan ahaan kara cajalladaha; ku hadla si ay u sii daayaan codka ama heesta aan soo xulno iyo interface si loo xusho heesta ama liiska heesaha aan rabno inaan dhageysano. Thanks to Internetka Waxyaabaha, jukeboxes-yada cusub waa aalado casri ah oo ku xirnaan kara taleefankeena casriga ah isla markaana u isticmaali kara shaashadda mobilka leh isdhexgal si loo xusho heesta ama liiska heesaha.
Qalab noocee ah ayaan ubaahanahay?
Dhismaha jukebox-ka guriga lagu sameeyo ama caadada ah waa wax iska fudud inkasta oo qiimaha qaybaha uusan yareyn tan iyo markii Jukebox wuxuu ubaahan yahay waxyaabo gaar ah oo qiimahoodu ka dhigi karo mashruuc qaali ah, laakiin waxaan marwalba ku badali karnaa dib loo warshadeeyay ama dib loo isticmaalay mashaariic kale, markaa qiimaha aad ayuu hoos ugu dhici karaa
Cunsurrada aan u baahan doonno waa:
16 Kaarka mikrosd-ga ah
Badhamada GPIO, fiilooyinka, iyo sabuuradda horumarinta
Guluubka casriga ah (Philips Hue, Xiaomi, iwm ...)
Waxaan sidoo kale u baahan doonaa guri ama loox lagu keydiyo dhamaan qaybaha sanduuqa jukebox ee guriga lagu sameeyo. Tan awgeed waxaan nafteenna ugu abuuri karnaa alwaax, muraayad iyo kartoon yar ama aan ku kasban karnaa sanduuqa waxyeellada leh ee aan u bannayno oo aan ku rakibno jukebox-ka aan abuurnay.
Mashruucan waxaan ku isticmaali doonaa Raspberry Pi, guddi SBC ah oo aan xamili karin oo keliya faylasha maqalka ee kala duwan laakiin sidoo kale ku xirnaan kara aalado kale. Laakiin si ay si sax ah u shaqeyso waa inaan ku rakibnaa nidaam hawlgal. Xaaladdan oo kale waannu doorannay OS OS, nidaam hawlgal oo si caqligal ah u maamuli doona Jukebox. Daaran bogga rasmiga ah Ma lihin oo kaliya nidaamka qalliinka laakiin waxaan heysanaa hab aan ku keydinayno sawirka kaarka microsd-ka. Markaan duubno sawirka, waxaan ku tijaabineynaa Raspberry Pi waana intaas.
Hadda waa inaan ku dheji guddiga horumarinta si aad ugu shaqeyso sidii badhanka furaha Jukebox-keena. Marka hore waa inaan ku dhejino badhannada sabuuradda horumarinta. Kadibna waa inaan galino fiilooyinka midig xiga badhanka isla markaana dhamaadka kale ee fiilada ku xirmaan isku xira si dhamaan fiilooyinka loogu diro dekedda GPIO ee Raspberry Pi. Tani waxay abuuri doontaa badhanka jukebox-ka oo aan hadhow barnaamij ama barnaamij ka sameyn karno.
Hadda waa inaan habeeyo arjiga GPIO si loo hagaajiyo badhannada aan u qaabeynay kuna xirnay Raspberry Pi.
Markaan diyaarinno dekedaha GPIO, waa inaan tagnaa Volumio, Codsiga muusigga ee Prota OS oo ku xir codsiyada barnaamijka muusikada iyo liisaska muusikada ee kala duwan oo aan hadhow ku isticmaali doonno jukebox. Dabcan, ma aha oo keliya badhamadu inay ku xirnaadaan dekedda GPIO laakiin sidoo kale kuwa ku hadla waa inay ku xirmaan dekedda USB ee Raspberry Pi.
Hadda waa inaan ku xirnaa guluubka caqliga badan. Nalalka midabada leh waa qayb muhiim ah oo ka mid ah jukebox, xaaladdan waxaan isticmaali doonnaa guluubka nalka casriga ah ee badala midabka sida heesta ku jirta. Si tan loo sameeyo, waa inaan marka hore ku xirnaa guluubka Prota OS. Mar alla markii ay ku xidhan tahay, barnaamijka 'Prota OS' waxaan ka heli doonnaa codsi la yiraahdo Sheekooyin (Sheeko) noo oggolaanaya in aan otomaatig ka dhigno xuduudaha qaarkood. Hawlgalku wuxuu noqon doonaa sidan soo socota: Haddii liiska 1 la riixo, guluubka wuxuu soo saaraa midab buluug ah. Xeerarkan waa in lagu abuuraa liis kasta oo muusig ah oo aan abuurnay.
Hadda waxaan heysanaa wax walba oo la soo uruuriyay, waa inaan wax walba ku keydinaa kiis aan dhisi karno nafteena ama aan si toos ah u adeegsan karno kiis jukebox gaboobay ama duugoobay, tan waa inaad adigu iskaa u doorataa.
Sidee loo isticmaalaa Jukebox-kan?
Adeegsiga jukebox-kan waa mid aad u xiiso badan maxaa yeelay waxaan abuuri karnaa liis heeso kala duwan ah, taas oo ah, hal hees halkii badh ama waxaan abuuri karnaa liistada muusikada halkii batoon oo u dhigma midab guluub khaas ah. Ku hagitaan aan ku raacnay Instructables kahadal isticmaal barnaamijyada dhinac saddexaad sida IFTTT oo qalabayn toos ah ku sameeya shaqooyinka qaarkood Raspberry Pi. Markaa waxaan u adeegsan karnaa kuwa ku hadla caqliga sida Amazon Echo ama si fudud ugu dar dareemayaasha dhaqdhaqaaqa si aad u shidato oo aad u bilowdo shaqada ama si fudud marka qalab gaar ah sida taleefanka casriga ah la soo dhawaado, jukebox wuxuu ciyaarayaa liis muusiko gaar ah ama hees ah. Adiga ayaa dejinaya xadka
Jukeboxyada ma yihiin kuwa waqtigoodu dhammaaday?
Hadda markaad fiirineyso xaddidaadaha jukeboxes-ka, waxaad la yaabi kartaa inay runti lama huraan yihiin iyo in kale. Dadka jecel retro, jir, jukeboxes-ka ayaa wali xiiso leh maxaa yeelay waxay noo ogolaaneysaa inaan dhageysano muusikada adigoon ku xirnayn casriga ama kombiyuutarka. Maxaa noqda "iPod duug ah", oo loogu talagalay kuwa jecel Apple.
Laakiin haddii aan runti nahay isticmaaleyaal wax ku ool ah, dan kama lihin aaladda oo waxaan dooneynaa oo keliya inaan dhegeysano muusikada, xalka ugu fiican ayaa ah afhayeenka caqliga badan ee ku xiran taleefankeena casriga ah si uu u qurxiyo qol kasta muusigga aan rabno. Natiijadu waa isku mid laakiin waa ka dhib yar tahay abuurista jukebox-ka nafteenna. Hadda, natiijadu maaha mid bilaash ah oo shakhsi ahaaneed sida haddii aan annagu abuuray aaladdaan. Miyaydaan sidaa u malayn?
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Raspberry Pi » Sida loo sameeyo jukebox-ka guryaha lagu sameeyo iyo shaqsi ahaan